🥇 app yekubatsira desk
Chiyero: 4.9. Nhamba yemasangano: 352
Vhidhiyo yeapp yedhesiki rekubatsira
Odha app yekubatsira dhesiki
Mumakore achangopfuura, iyo Batsira Desk app yave yakakurumbira kudzokorora misimboti yekutonga chimiro chehunyanzvi kana sevhisi rutsigiro, kuunza magadzirirwo ehurongwa hwehurongwa, kuvandudza sevhisi uye kusimudzira bhizinesi. Kushanda kweapp kwave kwakasimbiswa kakawanda mukuita. Kudzora pamusoro peBatsira Desk paramita inova yakazara, ese maturusi anodiwa anooneka anotendera iwe kuti utarise basa razvino uye zvikumbiro, otomatiki kugadzirira mirau nemishumo, uye kutonga zviwanikwa nemari.
Iyo USU Software system (usu.kz) yanga ichibata nenyaya dzemhando yepamusoro tsigiro yehunyanzvi kwenguva yakareba, izvo zvinoita kuti zvikwanise kunyatso kuseta miganhu yeBatsira Desk, kuburitsa iyo inoshanda zvakanyanya app inokurumidza kuratidza. kukosha kwayo. Kana iwe uchangobva kujairana neapp, tinokurudzira kuti uongorore hushamwari uye intuitive interface. Hapana chakashata pano. Vagadziri vanowanzo tadza kuenzanisa pakati pekuita uye kukwezva kwekuona kweprojekiti. Chinhu chimwe chinokunda chimwe. Marejista eDesk Rekubatsira ane ruzivo rwakadzama pamusoro pemashandiro azvino uye vatengi. Vashandisi havana dambudziko rekusimudza matura eapp kuti vaone maodha akapera, tarisa kune zvinyorwa zvekuchengetedza, mishumo, uye kudzidza nhanho yekudyidzana nevatengi. Workflows inoratidzwa zvakananga neapp munguva chaiyo. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kupindura kumatambudziko, kutarisa nzvimbo yehomwe yezvinhu uye zviwanikwa zvevashandi, kudzora nguva yekuraira, kurumidza kubata vatengi kuti vajekese zvimwe zvinhu.
Kuburikidza neDesk Rekubatsira zviri nyore kuchinjanisa ruzivo, graphic mafaira, zvinyorwa, manejimendi mishumo, chengeta tafura yevashandi kuburikidza neyakavakirwa-mukati app scheduler. Kana iyo kurongeka ikamiswa, saka vashandisi havana dambudziko pakuona zvikonzero zvekunonoka. Iyo haina kuisirwa sarudzo yekushandisa iyo app kusimudzira Batsira Desk masevhisi, kuita zvekushambadzira maSMS ekutumira, kutaurirana nevatengi. Imwe module yakaparadzana yakaitwa yemabasa aya. Makambani mazhinji anoita CRM kugona imwe yepamusoro otomatiki mapurojekiti anodiwa.
Parizvino, zvirongwa zveBatsira Desk zvinoshandiswa mumaindasitiri mazhinji. Nzvimbo yekushanda yeapp haina kungogumira kuIT-sphere. Iyo software inogona zvakare kushandiswa nemasangano ehurumende akatarisana nekudyidzana nehuwandu hwevanhu, mafemu madiki, uye mabhizinesi ega. Automation ingave yakanyanya mhinduro. Iko hakuna yakapfava, yemhando yepamusoro, uye yakavimbika nzira yekukwenenzvera zvinzvimbo zve manejimendi uye sangano, kuunza maitiro matsva, kutarisa mashandiro echimiro uye vekunze vanobatika. Iyo Batsira Desk app inotarisisa mashandisirwo ebasa uye rutsigiro rwehunyanzvi, inotarisisa mafambiro uye nemazuva ekunyorera, uye inopa rutsigiro rwezvinyorwa. Iko hakuna chikonzero chekushandisa nguva yakawedzerwa pane zvakajairwa mashandiro, kusanganisira kubvuma zvikumbiro uye nekuisa odha, maitiro acho azere otomatiki. Zviri nyore kwazvo kutevedzera zvese zviri kuitika uye zviitiko zvakarongwa kuburikidza neiyo yakakosha kuronga. Kana imwe foni ichida zvimwe zviwanikwa, mubatsiri wemagetsi anokuyeuchidza nezveizvi. Iyo Yekubatsira Desk chikuva chakanakira vashandisi vese pasina chero zvakakomba zvirambidzo. Chiyero chekugona kuverenga nekombuta hachina basa.
Iyo app inoputsa maitiro ekugadzira (zvakananga tekinoroji kutsigira mashandiro) kuita nhamba yakatarwa yematanho kusimbisa kunaka kwekutonga uye nekukasira kupindura kumatambudziko madiki. Mukana wavhurika kuti utaure zvakananga nevatengi, kuchinjana ruzivo, uye kutumira SMS. Kunze kwezvo, vashandisi vanogona kukurumidza kuchinjanisa graphic uye mavara mafaira, analytical uye mari mishumo.
Kugadzirwa kweVanobatsira Desk nyanzvi kunoratidzwa zvakajeka pamasikirini, ayo anobvumira organically kugadzirisa nhanho yeazvino basa rekuita uye kuseta anotevera mabasa evashandi. Nekubatsirwa kweapp, kushanda kwenyanzvi yega yega inotariswa, iyo inobatsira vashandi venguva yakazara kuvandudza hunyanzvi, kuona zvinonyanya kukosha, zvinonetsa nzvimbo dzesangano. Iyo yekuzivisa module inoiswa neiyo default. Iyi ndiyo nzira iri nyore yekuchengeta munwe wako pamhepo yezviitiko. Kana zvichidikanwa, iwe unofanirwa kushamiswa nenyaya dzekubatanidza chikuva nemasevhisi epamusoro uye masevhisi. Iyo purogiramu ndiyo yakakwana mhinduro kumakambani eIT akasiyana zvachose, tekinoroji kana masevhisi ekutsigira masevhisi, masangano ehurumende, kana vanhu.
Haasi ese maturusi anosanganisirwa mune yekutanga vhezheni. Dzimwe sarudzo dziripo pamuripo. Iwe unofanirwa kunyatsodzidza rondedzero inoenderana. Tanga kusarudza chigadzirwa chakanaka nedemo version. Muedzo hauna muripo zvachose. Makore mazana maviri apfuura, Adam Smith akawana zvinoshamisa: kugadzirwa kwemaindasitiri kunofanirwa kuputswa kuita mabasa akareruka uye akanyanya kukosha. Akaratidza kuti kupatsanurwa kwevashandi kunosimudzira kukura kwechigadzirwa sezvo vashandi vakanangana nebasa rimwe chete vanova nyanzvi dzemhizha uye kuita mabasa avo zviri nani. Mumazana ose emakore 19th ne20th, vanhu vakaronga, vakagadzira, uye vanotungamirirwa makambani, vachitungamirirwa nemusimboti wekugovanisa vashandi naAdam Smith. Nekudaro, munyika yemazuva ano, zvakakwana kuti titarise zvakanyanya kune chero kambani - kubva kuchitoro chemumugwagwa kuenda kune hofori yenyika seMicrosoft kana Coca-Cola. Izvo zvinozoonekwa kuti zviitiko zvemakambani zvine huwandu hukuru hwekudzokorora bhizinesi maitiro, imwe neimwe iri kutevedzana kwezviito uye sarudzo dzakanangana nekuzadzisa chinangwa chaicho. Kugamuchirwa kweodha yevatengi, kuendesa zvinhu kumutengi, kubhadhara mihoro kune vashandi - ese aya maitiro ebhizinesi ayo anobatsira app anodiwa zvakanyanya.